Saadaasha qabiirada Kubada Cagta kooxda ku Guuleysan doonta Premier League xiligaan? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Saadaasha qabiirada Kubada Cagta kooxda ku Guuleysan doonta Premier League xiligaan?
(10-8-2018) Khubarada kubadda cagta waddanka Ingiriiska ee ka shaqeeya warbaahinta kala duwan ee BBC, ayaa saadaaliyey booska ay kooxaha waaweyn ee horyaalka Premier League ka geli doonaan tartanka Premier League ee Jimcaha bilaabmaya.
24 khabiir oo ku takhasusay kubadda cagta oo hore wacdaro uga soo dhigay garoomada ayaa waxay faaqidaad dhamaystiran ku sameeyeen lixda kooxood ee waaweyn ee dalka Ingiriiska ee horyaalka sannadkan ku tartami doona, waxaanay isku waafaqeen intooda badan in horyaalka ay sannadkan markii labaad oo xidhiidh ah ku guuleysan doonto Manchester City oo xili ciyaareedkii tegay 19 dhibcood iyadoo ka horreysa kooxda kusoo xigta ku guuleysatay horyaalnimada.
Liverpool ayaa noqon doonta kooxda kula dagaallamaysa horyaalka Man City, waxaana aakhirka kooxda Klopp loo tuuri doonaa kaalinta labaad, balse naadiga ugu liidanaya xili ciyaareedkan ayaa ah Arsenal oo sida khubradu saadaaliyeen ka hadhi doonta tartanka Champions League, kuna dhamaysan doonta kaalinta lixaad.
Tababare Pep Guardiola oo saddexda horyaal ee LaLiga iyo Bundesliga hore ugu soo guuleystay wakhtiyadiisii Barcelona iyo Bayern Munich ayaa waxa uu markii labaad oo xidhiidh ah doonayaa inuu Premier League qaato, waxaanay u badan tahay in aanay kooxuhuna ka ridan karin oo uu cidlo u yaallo.
Barcelona ayuu Guardiola tababare u ahaa sannadihii iu dhexeeyey 2008-2011, wakhtigii Bayern Munich ayaa isaguna ahaa 2013-2016, hayaankiisa Manchester City ayaana markaas kaddib bilaabmay.
Jurgen Klopp, Jose Mourinho, Maurico Pochettino, Walter Sarri iyo Unai Emery ayay u taallaa hawl adag oo ah inay halgan la galaan Guardiola si ay uga dhacsadaan horyaalnimada oo koox kale loo cumaamado sannadkan, si tartanku u noqon karo mid furan oo dhex yaalla kooxaha waaweyn oo dhan.
Haddaba, khubarada ciyaaraha ee BBC oo tiradoodu tahay 24 ayaa waxay 21 ka mid ah isku raaceen in horyaalka ay ku guuleysanayso Manchester City, hase yeeshee, saddex khabiir oo kale ayaa kasoo horjeedsaday oo Liverpool u saadaaliyey. Saddexda Reds u cumaamaday horyaalnimada waxay kala yihiin Halyeygii Arsenal ee Ian Wright, Xiddigii kooxaha AC Milan iyo Chelsea ee reer Holland Ruud Gullit iyo lama-taabtaankii Arsenal ee Martin Keown.
Manchester United, Chelsea, Tottenham iyo Arsenal may helin hal cod oo sheegaya inay horyaalka ku guuleysan karayaan, hase yeeshee waxa kaga sii daran in dhamaan khubaradu marka laga reebo afar ay isku waafaqeen in Liverpool kaalinta labaad leedahay, halka United uu hal khabiir oo kaliya oo ah Dion Dublin uu kaalinta labaad u saadaaliyey.
20 khabiir ayaa isku raacay in Liverpool kaalinta labaad leedahay, laakiin kaalinta saddexaad ayay isku-soo dhowaadeen Manchester United iyo Tottenham, waxaana akhirkii codadka ugu badan heshay kooxda tababare Jose Mourinho oo saddexaad ku dhamaysan doonta.
Tottenham ayaa geli doonta kaalinta afraad oo tartanka Champions League usoo bixi doonta, balse Chelsea iyo Arsenal ayaa sannadkii labaad oo xidhiidh ah ka hadhi doona horyaalka naadiyada Yurub ee UEFA Champions League, waxaanay ka ciyaari doonaan Europa League xili ciyaareedka dambe.
Sidan ayay kooxuhu u kala horreyn doonaan:
Man City 2. Liverpool 3. Man Utd 4. Tottenham 5. Chelsea 6. Arsenal
Saadaashan ay khubradu sameeyeen waxay iyadoo aanu horyaalkuba bilaabmin niyad jab ku noqonaysaa jamaahiirta kooxaha Arsenal, Chelsea oo tababareyaal cusub hoggaamin doonaan xili ciyaareedkan, laakiin dhibaatada ugu badan ayaa waxay gaadhi doontaa Manchester United oo tababare Jose Mourinho uu shaqadiisa waayi doono haddii uu ku dhamaysto halka saadaashu sheegayso.
Halkan ka akhri sida khubradu u saadaalisay boosaska ay kala gelayaan lixda kooxood ee waaweyn:
Saadaaliye 1aad 2aad 3aad 4aad